Papa Francis vanoenda kuMauritius, Mozambique neMadagascar
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Papa Francis vanoenda kuMauritius, Mozambique neMadagascar
Kuputsa Kufamba Nhau • Madagascar Kuvhuna Nhau • Mauritius Breaking Nhau • Mozambique Breaking News • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
The Katorike Pope Francisrwendo rwemarudzi matatu rwakatanga muMozambique uye ruchapera mu chitsuwa cheMauritius. Papa wekupedzisira kushanyira Madagascar aive John Paul II makore makumi matatu apfuura.
Kushanya kwaPope kuVanilla Islands nekuMozambique kwakawedzera kuoneka kwenharaunda uye kuchave nemwenje pazvitsuwa zviri kushanyirwa kwemwedzi inotevera.
Vanhu vanofungidzirwa kuva miriyoni vakaungana munhandare yeSamandrakizay nhandare yeMadagascar muguta guru neSvondo kuti vanzwe Pope Francis vachitaura misa pagumbo repiri rerwendo rwake rwemarudzi matatu eAfrica.
Ruzhinji rwevanhu rwakanga rwakamirira nemoyo murefu, rwuchinosvika chinhambwe kubva kumaawa ekutanga, kuti vaone papa, papa wekutanga kushanyira mumakore makumi matatu.
"Varongi vanofungidzira kuti kune vanhu vangangosvika miriyoni imwe," akadaro mutauri weVatican.
Varongi vaive vambotaura kuti vaitarisira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete. Vamwe vakazvitsanangura semusangano mukuru kuruzhinji munhoroondo yeMadagascar.
Vanhu vazhinji vaipfeka papa-akanyorwa machena uye yeyero ngowani - mavara eVatican, uye vakafara apo papa-nhare yaifamba nemumafungu emhepo-akatsvaira eguruva dzvuku rakatorwa kubva munhandare pasi.
Panguva yemuchato, papa weArgentina akavakurudzira "kuvaka nhoroondo muhukama nekubatana" uye "mukuremekedza zvakakwana pasi nezvipo zvaro, zvichipesana nechero nzira yekushandisa."
Vakataura vachipesana ne "zviito zvinotungamira mutsika yeropafadzo uye kusiiwa" uye akashoropodza avo vanoona mhuri se "nzira yekupedzisira yezvatinofunga kuti zvakanaka uye zvakanaka."
"Zvakaoma sei kumutevera (Jesu) kana tikatsvaga kuzivisa humambo hwedenga nehurongwa hwedu pachedu kana… kushungurudza zita raMwari kana rechitendero kutsigira zviito zvechisimba, rusarura uye kunyangwe kuuraya."
Mushure memisa papa achashanyira Akamasoa, guta rakavambwa nemupristi weArgentina Baba Pedro, uyo akasimudza zviuru zvevaMadagascar marara kubva muhurombo
Kwayedza Svondo mangwanani, kuchechi yeAndravoahangy yeAntananarivo, mufundisi Jean-Yves Ravoajanahary akaudza vanhu zviuru zvishanu parwendo rwemaawa maviri rwavaizofanira kuita kuti vasvike kunhandare yeSoamandrakizay.
“Tichagovanisa vanamati muzvikwata zvezviuru nekuti nzira yacho ine njodzi huru. Panguva ino vanhonga nhumbi nevapambi vari kunze kuti vabate vanhu, ”akadaro.
Rimwe nerimwe rimwe mapoka akatanga rwendo, vakaungana pamwe chete muchando uye vachiimba rumbidzo kuMhandara Maria. Traffic yakanga yakavharwa.
Hery Saholimanana akasiya imba yake munguva dzekutanga nenhengo nhatu dzemhuri.
"Ndiri kutya kusvika mushure memuganhu we6: 00 yekupinda," akadaro 23 ane makore ane makore mudzidzi weIT, achifamba nekukasira.
Rado Niaina, ane makore makumi maviri nemapfumbamwe, akati akabva kunyangwe kare, na29: 2 mangwanani, achitya "yekusawana nzvimbo."
Vazhinji vaive vatomisa matende kumucheto kweguta neChishanu, yakashongedzwa nezvikwangwani zvemupapa.
Prospere Ralitason, mushandi wemapurazi ane makore makumi manomwe, akasvika nevamwe vafambi vanosvika zviuru zvishanu kubva kuguta riri pakati kumabvazuva kweAmbatondrazaka, mamaira 70 (mamaira 5,000).
"Taneta, asi zvakafanira kuita zvese izvi zvibayiro kuti tione papa nemaziso edu uye tigowana kuropafadzwa kwake," akadaro.
Zviuru zvevechidiki - kunyanya mascouts - vakaungana kumurindiro kuSoamandrakizay neMugovera, vachimirira nguva mumoto kuti Francis asvike.
"Ndiri pano kuzokumbira kukomborerwa napapa kutarisana nezvinonetsa zvehupenyu, kusachengeteka, hurombo nehuori," akadaro mudzidzi ane makore 17 Njara Raherimana.
"Izvi zvese zvinondipa tariro yeshanduko munyika yangu," akadaro mumwe mudzidzi, Antony Christian Tovonalintsoa, ​​anogara kumucheto kweguta guru.
Panguva yemuchato, Papa Francis akarumbidza "mufaro uye kushingairira" kweboka revaimbi.
Akakurudzira vechidiki kuti varege kuwira mu "kuvava" kana kurasikirwa netariro, kunyangwe pavakashaiwa "shoma shoma" yekuwana uye kana "mikana yekudzidza yanga isingakwani."
Pakutanga neMugovera, Francis akaita chikumbiro kuna Madagascans kuti vadzivirire nharaunda yakasarudzika yeIndian Ocean kubva "pakutemwa kwemiti zvakanyanya."
Mavhiki mushure mekutsva mumoto muAmazon, papa weArgentina akaudza vaaigamuchira kuti vanofanira "kugadzira mabasa nekuita mari zvinoremekedza nharaunda uye zvinobatsira vanhu kutiza hurombo."
Madagascar - inozivikanwa nekusiyana kwayo kukuru kwemiti nemhuka - inogara vanhu vane mamirioni makumi maviri neshanu, vazhinji vacho vanogara muhurombo nemari isingasviki madhora maviri pazuva.
Vanopfuura hafu yevechidiki varo havasi pabasa, kunyangwe kana vazhinji vaine hunhu hwakanaka.
Papa wekupedzisira kushanyira Madagascar aive John Paul II makore makumi matatu apfuura.
Francis akashanyirawo Mozambique kutanga kwevhiki, uye anofanirwa kuenda kuchitsuwa cheMauritius neMuvhuro.